Mpanonta Nanivana Lahatsoratra Iray Hafa An’ny New York Times, Mitondra Fanazavana Momba Ny Kabary Nafenina Mahakasika Ny Tontolo iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2016 7:59 GMT
Nesorin'ireo Pakistaney mpanonta gazety tsy ho eo amin'ny pejy voalohany ny tantara mitondra lohateny hoe “Bilaogera Tandindonin-doza ao Bangladesh”, tsy ho ao anatin'ny famoahany ny dika ho an'izao tontolo izaon'ny The New York Times ny 2 Janoary 2016 teo, navela ho faritra banga no teo.
Lahatsoratra manoritsoritra ny famonoana ireo bilaogera Bangladeshi izay manoratra momba ny maha-laìka, ny tsy finoana an'Andriamanitra, ny zon'olombelona ary ny fahalalahana sivily. Nanomboka tamin'ny fitsongoana dia an'i Asif Mohiuddin io, izay velona ihany taorian'ny tsindrona antsy natao azy tamin'ny 2013, ary fotoana fohy taorian'izay dia nampidirina am-ponja noho ny fanoratany zavatra mitaky fiovàna. Mitovy amin'ny an'ireo bilaogera Bangladeshi marobe ny tantarany, izay natao lasibatra ary indraindray dia maty novonoina rehefa avy notsongaina sy nampangain'ireo henjam-pihetsika ara-pinoana ho tsy mino an'Andriamanitra’. Manana zo mitovy amin'ny olompirenena rehetra ihany ireo tsy mino an'Andriamanitra ao anatin'i Bangladesh izay Miozolmana no betsaka ao aminy, saingy tsy dia manao zavatra loatra hampihenana ireny fanafihana ireny, na mitondra ireo mpamono mba hiatrika fitsaràna ny governemanta laika ao amin'io firenena io.
@HaticeAVCI_ @nytimes tsy vao voalohany raha ny marina. Efa saiky zavatra iainana isanandro io.
Fotoana fohy taorian'izay, namoaka fanambaràna iray ny The New York Times nanome fanamarihana avy amin'ireo mpanonta gazety mikasika ny antony nifidianan-dry zareo hanaisotra ilay tantara. Fohy ilay fanamarihana:
Nanoratra ny toniandahatsoratry ny The New York Times, Margaret Sullivan, fa tsy nomena fotoana ny gazety mba handàvany ilay fanesorana lahatsoratra.
Naneho hevitra tamin-keso ilay Pakistane mpanoratra sady bilaogera, Bina Shah:
Izay mihitsy, tsy vao io no tantara goavana voalohany nesorina avy amin'ny fanontàna ny The New York Times teo an-toerana. Ny Martsa 2014, tantara iray tao amin'ny Times momba ny fahalalàn'ireo Pakistane manampahefana ny fivezivezena sy toerana nisy ilay mpitarika ny Al-Qaeda, Osama Bin Laden, no tratry ny sivana, ary dia saiky navela ho fotsy tanteraka ny pejy voalohany tamin'izay.
Fanivànantena va re? Ny NYT iraisampirenena tao Pakistàna, tsy nisy ny tantara nosoratan'i @carlottagall momba an'i Bin Laden
Volana iray taty aoriana, “nanjavona” ihany koa ny ampahan-dahatsoratra iray fanehoankevitra nisy fanivaivàna finoana nataon'i Ali Sethi, namela pejy iray foana taorian'izany. Valiny, nosoratan'i Bina Shah ny momba izay fomba fitondràna ny sivana ataon'ireo media amin'ny tenany ihany, fa tsy didy ofisialy avy amin'ny governemanta:
Tato anatin'ny taona vitsy lasa, voakiana be mihitsy ireo Pakistaney manampahefana noho ny fomba fanao peta-toko ataony hibahanana vontoaty ety anaty aterineto. Na dia mifantoka amin'ny fandraràn'ny governemanta ny Youtube aza no betsaka amin'ny adihevitra momba ilay olana, nampitombo ny ahiahy ihany koa momba ny toerana misy ny fahalalahan'ny fampitambaovao ao amin'ny firenena ny fibahanana ny tranonkalan'ny Al Jazeera sy BBC. Ny gazety Express Tribune manokana dia niharan'ny fanarahana maso akaiky taorian'ny namborahan'ny mpiara fahiny iray tao aminy ny fomba fandrafetan'ny tsindry politika ny asa fandrakofana vaovao ataon-dry zareo.
Ao anatin'ity ohatra ity, maneho taratra ny zavamisy maizina sy mahery setra ho an'ny fanehoana hevitra ao Pakistàna ny asa fanivànana. Araka izay ametrahan’i Shah azy :